नेवाः एकता दिवसः नेवाः वर्गीय मुक्तिको कुरा
Home News and Events Shahid Weekly नेवाः एकता दिवसः नेवाः वर्गीय मुक्तिको कुरा
Tuesday, 22 January 2013 14:58	ourkirtipur
नेवाः एकता दिवस तेसो् वार्षिक कार्यक्रम ऐतिहासिक नगरी कीर्तिपुरमा माघ ७ गते हुँदैछ । नेवाः स्वायत राज्य मंका संघर्ष समितिको निर्देशनमा हुने सो नेवा एकता दिवस सफल पार्न कीर्तिपुरमा क्रियाशील मंका परिषद्का कार्यकर्ताहरु व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छन् । यो पंक्ति लेखिरहँदा र प्रकाशित हुँदा दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि नेवाः ए–कता भैरहेको छ ।
नेवाः एकता हुने कि ए–कता हुने यो वार्षिक कार्यक्रमसम्म पुग्दा हामी नेपाली र नेवाःले सोच्नुपर्ने बनाएको छ । समाज विभिन्न जात र भाषाभाषाीको र विभिन्न वर्गमा विभाजित छन् । नेवाः स्वायत राज्य मंका समिति पनि विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका नेवाःहरुको संयुक्त समिति हो । नेवारहरुको संयुक्त समिति नेवारहरुको भाषा, जात र हक अधिकारको सवालमा मात्र एक ठाउँमा छन् । वर्गीय दृष्टिले कार्य गर्न पछि जुन क्षेत्रबाट, संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यसैको आवाज उठाउनसँगै लागेका छन् । सतिक उदाहरणको लागि कुनै निर्वाचनको कार्यक्रम भयो भने नेवाः एकता होइन ए कता भैरहेको छ । यसरी किन हुन्छ ? मलाई लाग्छ वर्गीय समाजमा राजनैतिक दलहरुको आ–आफ्नै सिद्धान्त र नीति रहेको हुन्छ । राजनैतिक दलको लोगो बोकेका नेवारहरुले आ–आफ्नै दलको स्वार्थ हेरेको हुन्छ । जसको कारणले आजसम्म पनि नेवारहरु ए–कतामा छन् ।
नेवार लगायत सबै जातजातिमा विभेद छ । नेवारमा धर्नी नेवार र गरिव नेवार, तामाङ्गमा, शेर्पा, गुरुङ्ग, थारु, मैथली सबै जातजातिका धनी र गरिव वर्गमा रहेका छन् ।
सम्पन्न र शोषक नेवारले गरिव र विपन्न नेवारलाई, सम्पन्न गुरुङ्गले विपन्न गुरुङ्गलाई, तामाङ्गले तामाङ्गलाई थिचोमिचो हेपाहा र शोषण गरेकै छन् ।
जबसम्म समाजमा राजनैतिक रुपले वर्गीय मुक्ति हुँदैन कुनै जातजातिको मुक्ति र हक अधिकार स्थापित हुनै सक्दैन । अहिलेसम्म समाजमा देखिएका जातीय मुक्तिको नारा गैरजातिको हालिमुहाली गर्ने षड्यन्त्र मात्र सावित भएका छन् । नत्र नेवारहरुको संगठनमा गैरनेवार प्रमुख हुने कार्यक्रममा गैरनेवार नै प्रमुख अतिथि हुने किन ? के हाम्रो नेवार संगठनमा नेवारले नेतृत्व गर्ने क्षमता छैन, कार्यक्रममा नेवारहरुको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने र विचार दिने व्यक्तित्व छैन । हामी जातिभित्र मिडियामुखी नबनी गैरजातको राज्यका प्रमुखको अतिथि बनाउने परम्परा टोड्न सक्दैन ?
हामीले हाम्रो कार्यक्रमले, गतिविधिले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्यो भने हामं्रो पछाडि मिडियाले ठूलो भूमिका खेल्नेमा शंकै छैन ।
कीर्तिपुरमा हुने ७ गतेको नेवाः एकता दिवसमा पनि गैरनेवार प्रमुख हुने होला, मिडिया र टिभीमा आउने रहर पुरा गर्ने होला । खयर जे जस्तो किसिमले कार्यक्रम गर्दा पनि यो नेवाः एकता दिवसले वर्गीय मुक्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्न सकोस् । हामी र हाम्रो पहिचानको संरक्षण कसरी गर्ने, संविधानसभाको भंग कसले कसरी ग¥यो ? आदिबारे छलफल गरी अगाडि बढ्न सक्यो भने नेवाः एकताले भोलिका दिनमा अग्रसर हुन सक्नेछ । अव हामी आफ्नै खुट्टामा उभौं कसैको भ¥याङ्ग नबनौं ।
नेवारहरुले अब पनि सोच्न सकेन भने धरोहर भन्दा भन्दै धरोहर भाँच्ने काम गर्न नदेऔं । सही विचार लिऊँ, वर्गीय मक्तिमा लागौं, देश र जनताको हित हुनेछ विजय हुनेछ । – एनम